Inodzosa makuhwa nezve Apple Watch Series 8 ine flat dhizaini | Nhau dze iPhone
Ngirozi Gonzalez | 19/05/2022 16:28 | Apple Watch, Noticias
Iyo Apple Watch yave zvakakosha kune vakawanda vashandisi uye tarisiro yakatenderedza zvizvarwa zvitsva yakakwira zvakanyanya. Gore rapfuura, hutsi hukuru hwakagadzirwa kutenderedza dhizaini itsva iyo Apple Watch Series 7 yaizove nayo. Zvakafanotaurwa kuti mipendero yakatenderedzwa yaizosiiwa nekuda kweimwe rectangular uye flat dhizaini. Pakupedzisira pakanga pasisina rombo rakanaka uye kwaiva nekuenderera mberi. Zvakadaro, Runyerekupe rwekurebesa dhizaini inonzwika zvakare yakatenderedza Apple Watch Series 8 uye zvinokwanisika kuti kwapera gore, Apple ichaita kusvetuka kwezvakanaka.
Flat dhizaini inotenderera yakatenderedza Apple Watch Series 8
Hausi kurota asi zvinoita sekunge a ndatoona Mumitemo yose. Isu tinorangarira zvimwe chete zvakaitika gore rakapera asi nerwendo rurefu rwekuenda. Izvo zvese zvakatanga neruzivo kubva kune anonyatsozivikanwa leaker Jon Prosser nezve inogoneka dhizaini nyowani yeApple Watch Series 7. Muchokwadi, akawana zvirongwa zveCAD zveanofungidzirwa dhizaini uye akagadzira nhevedzano yepfungwa, aine huru media mushandirapamwe, mu. iyo itsva rectangular uye flat dhizaini inosiya macurves ezvizvarwa zvese zveApple Watch kusvika parizvino. Zvakadaro, dhizaini yekupedzisira yeSeries 7 haina kufanana nepfungwa kana kubvisa mipendero yakatenderedzwa.
Ikozvino chave chijana che Nhepfenyuro dzeApple 8 iyo ichaona chiedza mumwedzi iri kuuya. Makuhwa anonongedzera zvigadzirwa zvitatu zvitsva mumharidzo iyi. Kune rumwe rutivi, Apple Watch Series 8. Kune rumwe rutivi, chizvarwa chechipiri cheSE. Uye, pakupedzisira, chinyorwa chitsva chakadanwa muongorori edition, nezvimwe zvinhu zvakasimba zvakanangana nemitambo ine njodzi uye mamiriro akanyanya.
Tanzwa kubva kwabva nhasi kuti kune girazi remberi rakafuratira kuratidza apple wachi. Mukana wepamusoro wekuti iyi ndiyo girazi rekumberi reApple Watch Series 8.
Handisati ndanzwa nezve kuti iri kugadziridzwa sei imba kana kuti ndeipi modhi parizvino.
mufananidzo mufananidzo chete kwete chaiwo. https://t.co/uC6i22Q0aZ pic.twitter.com/DmWh8FOZGE
- ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) Dai 16, 2022
Mushandisi ShrimpApplePro anozivikanwa paTwitter nekuburitswa kwake kweiyo iPhone 14 Pro, pakati pevamwe, akavimbisa izvozvo iyo pani yeApple Watch Series 8 yaizove rectangular. Anovimbisawo kuti haana mashoko ane chokuita negadziriro yose kana kuti bhokisi rakadaro, naizvozvo hapana chimwe chatinozivawo. Asi chii chiri chokwadi ndechekuti rectangular crystal inofanira kuiswa mubhokisi rectangular. Izvi zvinogona kumutsidzira iyo flat, rectangular Apple Watch pfungwa izvo zvakatanga, sezvatave tichitaura, Jon Prosser gore rapfuura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Runyerekupe nezve Apple Watch Series 8 ine flat dhizaini inodzoka